Industrial Ultrasonic Equipment Fekitori - China Industrial Ultrasonic Equipment Vagadziri uye Vatengesi
Ultrasonic yekupararira michina
Ultrasonic yekupararira michina yakakodzera kune akasiyana mhinduro, kusanganisira yakakwira viscosity mhinduro. Simba rakajairika rinobva ku1.5KW kusvika ku3.0kw. Iwo ma particles anogona kupararira kune nano level.
Ultrasonic mvura processor sonicator
Ultrasonic liquid processor sonicator ine akasiyana siyana mashandisiro, kusanganisira kuwedzera makemikari uye catalytic maitiro, cell lysis, kutanga kupararira, homogenization, uye kudzikisa saizi. Iyo ultrasonic yemvura processor sonicator inoumbwa nesprobe uye magetsi magetsi. Iyo processor zvakare ine tactile keypad, programmable memory, pulsing uye nguva yekuita, kure kure / kudzima kugona, kudzoreredza kuchengetedzeka, uye LCD skrini inoratidza yakapfuura nguva uye simba kuburitsa kuratidza. kusangana zvakasiyana ...
Yakanyanya kusimba processor, dhizaini yekushandisa dhizaini, inonzwisisika mutengo wekutengesa, ipfupi nguva yekuendesa, yakakwana mushure-kutengesa dziviriro